Maxay yihiin siyaabaha ugu fudud ee lagu heli karo dib-u-celinta SEO SEO?
Marka la eego nuquladii ugu danbeysay ee Google, dad badan oo websaydhka ah waxay u muuqdaan kuwo rumaysan in dib-u-celinta aysan awood u lahayn inay website-keeda. Haa, sannadka 2012 wuxuu keenay isbeddello badan oo ku saabsan isku xirka adduunka. Meelo badan oo shabakado ah oo ku hawlan farsamooyinka dhismaha khiyaanada leh ayaa lumiyay darajooyinkooda. Si kastaba ha ahaatee, cusbooneysiinta Penguin looma qorshaynin ujeedada ah in la yareeyo qiimaha dhabarka si loo helo qaab-u-raadin raadin. Hadafka ugu muhiimsan ee warbixintan waxay ahayd in la badalo qaababka helitaanka casiirka xidhiidhka. Kuwa iyagu ku guuleystay in ay la qabsadaan xeerarka cusub, abuuro naqshado tayo leh oo tayo leh iyaga oo isticmaalaya farsamooyinka dhismaha ee isku dhafan - the vape store usa. Sababtaas awgeed shaki kuma jiro in dhismaha isku-xirku wali ka ciyaaro door muhiim ah oo ku ool ah raadinta mashiinka raadinta
Waxaa intaa dheer, waa mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan iyo qayb muhiim ah ee istaraatijiyad kasta oo suuq ah. Isticmaalayaasha waxay u muuqdaan inay ka soo iibsanayaan walxo ka soo jeeda caan ah oo caan ku ah webka. Si kor loogu qaado wacyigaaga iyo awooddaada internetka, waxaad u baahan tahay inaad dhisid isku xirnaan badan inta aad awooddo. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan tahay inaad hubiso dhamaanba bogaggaaga SEO-ga in ay ka yimaadaan website-yada sare PR sida dadku waxay u maleynayaan inkasta oo ay saameynayaan. Iyadoo lagu sheegayo ilaha webka ee ugu wanaagsan ee ku yaal niche waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee lagu heli karo kalsoonida macmiilkaaga.
In this article, waxaan ka wada hadli doonaa qaar ka mid ah xeeladaha dhismaha xiriirka ah oo kaa caawin doona inaad abuurto sare SEO SEO backlinks iyada oo loo marayo content abuurista iyo qaybinta. Maadaama waayo-aragnimadayda shakhsi ahaaneed ay muujinayso istaraatijiyad dhisme oo xiriir la leh mabaadii'da maareynta maareynta waxay kor u qaadi kartaa saamiyada bulshada waxayna kordhisaa tirada soo-celinta dabiiciga ah ee soo socda.
Siyaabaha loo helo barnaamijka sare ee SEO SEO
Ganacsi kasta oo online ah oo raba inuu sii joogo meel u dhow macaamiisha mustaqbalka waxay u baahan tahay inay lahaadaan jiritaan bulsho oo xoogan. Iyadoo la tixgelinayo jawaab celinta macaamiisha ayaa aad muhiim ugu ah shirkad kasta oo internetka ah oo doonaya inay buuxiso baahida macaamiisha.
Shirkadda dhismaha ee shirkadani waa mid sahlan oo loogu talagalay jiilka xiriirinta. Waxaad abuuri kartaa xiriirro cusub adigoo la soconaya faallooyinka, jawaab-celinta, iyo talooyinkaaga. Waa inaad heshaa ilaha webka ee qaybta u leh inay ku soo celiyaan jawaab celinta ayna daabacaan jawaabahaaga halkaa.
Intaa waxaa dheer, waxaad ka faa'iideysan kartaa adigoo isticmaalaya boggaga internetka ee dib u eegista sida Amazon Macaamiisha, Trustpilot, Kee?, ConsumerReports, iyo wixii la mid ah. Nidaamyadaan internetka waxay u adeegaan inay ku xiraan shirkadaha doonaya inay helaan jawaab celin macaamiil ah iyo kuwa doonaya inay bixiyaan. Isticmaalka farsamada farsamaynta dhismaha, waxaad heleysaa fursado badan oo ra'yi-celintaada lagu daabici doono qaybta jawaabcelinta macaamiisha ama xitaa bogga weyn.
Waxaad ka tagi kartaa markhaati sharaxaad labadii jumladood ama daraasad faahfaahsan oo faahfaahsan. Xaqiiqdii, waxaad u baahan tahay inaad noqoto mid gaar ah, run ah oo daacad ah. Iskuday inaadan ka badneyn shirkadda sababtoo ah dib u eegistaada waxay u egtahay xayeysiin. Samee khudbadda ku saabsan sheyga wax soo saarka halkii aad ka faa'iideysan lahayd shirkadda. Haddii kiiskagaaga daraasadda bixiya fikrad khaas ah oo qiimo leh oo soo bandhigaya waxtarka dhabta ah ee badeecada ama adeegga gaarka ah, markaa waxay u badan tahay in jawaab-celintaada lagu daabaco xiriir la leh domainkaaga si aad u xaqiijiso inaad tahay qof dhab ah.
Sidaa darteed, markaa, waxaad heli doontaa dib u habeeyn buuxa oo PR oo bilaa lacag ah iyo dadaal.